Masayendisiti anotaura kuti muviri wakanaka wemudzimai uripo uye pano ndizvo zvinoratidzika - HEALTHY MAG PLUS - TELES RELAY
HOME » MAZANO Masayendisiti anotaura kuti muviri wakanaka wemukadzi uripo uye pano ndizvo zvaanoratidzika - SANTE PLUS MAG
kugashira / Fitness & Wellness /
Masayendisiti anotaura kuti muviri wemukadzi akakodzera uripo uye hezvino ndizvo zvazvinoita
Zvinowanzoreva kuti runako hunotenderera huchifamba kwenguva. Zvechokwadi, tinogona kuona nyore nyore kuti chimiro chemukadzi akakodzera chakasiyana kubva kune rimwe remakore kusvika kune rinotevera. Pakati pemhando dzakashata uye zvishoma zvishoma zvakaratidzwa mumunda wefashoni, zvinoratidzika zvisinei kuti pane zviyero zvakanaka zvichienderana nesayenzi uye kuti mukadzi anozvibata, sezvinoitwa zvakare Zuva.
Muviri unonyadzisa, kunyanya kukwikwidza ... Vanhu vanowedzera uye vari kutambura nemufananidzo wavo uye kunyanya kutsoropodzwa kwavanowana. Zvechokwadi, kusimudzirwa kwemasangano evanhu vakawanda kwakabudisa mitauro yevamwe ndokuisa mberi mifananidzo ye vakadzi yakanaka, muscular, zvipo zvechipo uye pamusoro pezvose, pasina kusakwana. Migumisiro yei? Zvimwe zvakaoma kune munhuwo zvake. Zvisinei, sayenzi inotisimbisa uye inoratidza kuti zviyero zvemukadzi akakodzera zviri pedyo neicho. Tsanangudzo.
Mudzimai akakodzera maererano nesayenzi
Maererano nerimwe chinyorwa Scientific, yakanyorwa naDevendra Singh weYunivhesiti yeTexas uye yakanyorwa zvakare Zuva uye nemagazini Eva, iyo nzira yehukomba haingatenderi nguva asi asi pane pfungwa yokuti tine hutano uye kubereka kwomukadzi ari pamberi pedu. Izvi zvinoita kuti zvive nyore zvichienderana nehombodo yemunhu uye chiuno uye chiuno.
Nokudaro, zvinenge zvichiita sokuti mukadzi akanaka, chiuno uye chiuno zvaizova 99-63-91 maererano neyedzimwe 1,68 m. Asi chaizvoizvo, mukadzi uyu anotaridzirei? Kelly Brook, muenzaniso wekuChirungu uye chiremba. Aizova nemuviri wakabatana uye ave mukadzi akakwana morphologically.
Dzimwe tsvakurudzo dzakawanda dzezesayenzi, zvisinei, dzakaratidza zvimwe zvakasiyana nezvemuviri wakanaka. Maererano neumwe kudzidza musayendisiti, akatumwa zvakare nhasi, chimiro chemuviri wakakwana chinoparadzanisa kubva pane izvo zvakawanikwa pamusoro.
Vatsvakurudzi vakakumbira varume ve40 nevakadzi ve40 kuti vaenzanisire muviri wavanofunga kuti wakanaka mune zvepabonde ravo uye vakomana vakasiyana uye zvino zvakazoenzaniswa ne morphology yevatori vechikamu. Izvo zvakawanikwa kuti vakadzi nevarume vanobvumirana pane zviyero zvakakwana zvepabonde rimwe nerimwe. Zvechokwadi, zvigumisiro zvinoratidza zvakada kufanana maererano nemuviri mass index (BMI) uye chiyero pakati pechiuno nehudyu uye pakati pechiuno uye kumusoro kwemuviri.
Pamusoro peumwe mufananidzo 3D, muviri wakakwana uri kuruboshwe. Kune kurudyi, uyu munhu chaiye maererano neBMI.
Inowanikwa kuti muviri wakanaka wechikadzi unotendeuka zera zviduku pamwe nehudyu dzakapfava. Vatsvakurudzi vakaonawo kuti zvaidiwa zvaienda kune chikwata chikuru uye zviduku zviduku.
Nezvemurume akakodzera, iyi inoratidzwa ne morphology muV kana kuti piramidhi inopindurwa. Mafudzi acho akareba kupfuura mahudyu uye naizvozvo chiuno chinotapenya.
Chidzidzo chacho chinosimbisawo chokwadi chokuti, murume kana mukadzi, tinowanzowedzeredza chimiro chemuviri chatinofunga kuti chinonyanya kukosha. Asi, sezvakatsanangurwa nemukuru wekambani iri mubato rekuita 3D mifananidzo ye nhasiNickolay Lamm, miviri yakanaka uye miviri yakaisvonaka yose yakanaka. Maererano naye, maonero edu ekuonekwa kwakakwana aizonyanya kufarirwa nevanhau.
Izvo zviyero zvemukadzi
MuFrance, zvinowanzoreva kuti 90-60-90 ndiyo yakakosha. Zvisinei, chokwadi chiri chakasiyana chaizvo nokuti vakadzi veFrance vanowanzoita 93-75-100 yekuputika, chiuno uye chiuno, sezvinobudisa tsvakurudzo yakatorwa ne BFM TV.
Zvimwe zvishoma zvishoma kune zveKelly Brook asi zvakanyanya kufanana nehutano hwakanaka nokuti BMI yemukadzi wekukura uku inogona kuenderana ne23,3, chimiro chakabatanidzwa neboka rezvimwe zvinhu zvinorema.
Pakupedzisira, chimiro chevakadzi chinoenderana nevose. Runako uye simba rekunyengera hazvirevi kungoonekwa chete asiwo nekubatana uye kubatanidza kuti tinosika pamwe chete.